निर्वाचन सामग्री कुन विदेशी अनुदानमा? कुन आफ्नै बूतामा?
वैशाख ३१ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने ६७ किसिमका सामग्री जोहो गर्न हिजोआज निर्वाचन आयोगको धपेडी बढेको छ।
आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै देशभरका लागि चाहिने ६७ किसिमका सामग्रीको सूची तयार गरेको थियो, जसमध्ये अधिकांश व्यवस्थापन भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी हुन नदिई तयारीमा लागिरहेको उनले बताए। 'सबै काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'केहीमा पनि ढिलाइ छैन। सामग्री व्यवस्थापनले केही पनि काम अड्किने वा ढिला हुने हुँदैन।'
६७ प्रकारका सामग्रीमध्ये अधिकांश निर्वाचन आयोगले आफैं खरिद गर्दैछ। १२ प्रकारका सामग्री भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खरिद गर्न भनेको छ। ११ प्रकारका सामग्री चीनले सहयोग गर्ने भएको छ। भारतले हातमा लगाउने मसी, रबर म्याट र छेकाबारा सहयोग गर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
निर्वाचन प्रयोजनकै निम्ति प्रयोग हुने ६७ प्रकारका सामग्रीबाहेक भारतले सवारीसाधन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कम्प्युटर सहयोग गर्दै छन्। भारतले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनअघि ४९ वटा गाडी, ३० वटा मोटरसाइकल र ७ वटा स्कुटर सहयोग गर्दै छ। ४९ गाडीमा एउटा कार, ७ वटा स्कोर्पियो जीपलगायत रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो।
चीनले सहयोग गर्ने निर्वाचन सामग्रीमा खासगरी स्टेसनरी छन्। चीनले कालो र रातो लेख्ने जेलपेन, मार्कर, स्केल, कैंची, ग्लुस्टिक, क्यालकुलेटर, पन्चिङ मेसिन, स्ट्याम्पप्याड, स्ट्याम्प प्याडको मसी र टेबुल घडी दिने भएको हो।
यसबाहेक आयोगले अन्य सामग्री पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि चाहिने सूचीमा राखेको छ। स्ट्यापलर, स्टिच पिन, लाहा मैनबत्ती, पुसपिन, क्लिप पिन, कपडा, थैला, रबर र पित्तलको स्वस्तिक छाप, औषधि, मतपेटिका, टर्चलाइट, फोटोकपी पेपर लगायत सामग्री यो सूचीमा छन्। यसमध्ये १२ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्ने छन्। बाँकी सबै निर्वाचन आयोगले आफैं खरिद गर्ने छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवका अनुसार अधिकांश सामग्री खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ। कतिपय सामग्री आयोगमा आइसकेका छन् भने बाँकी आउने क्रममा छन्।
आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि ३० हजार मतपेटिका खरिद गर्दै छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका ५० हजारभन्दा बढी मतपेटिका प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन्। त्यसैले यसपटक ८० हजार भन्दा बढी मतपेटिका प्रयोग हुने आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७३, ०२:२५:५६